:: သက်၀င်လှုပ်ရှား ဂိမ်းများ
MPT ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ - [ဂေါ်ဂိမ်းများ]
ဤစာမျက်နှာသည် [ဂေါ်ဂိမ်း] ( ဝန်ဆောင်မှု ) တွင်ပါဝင်ကံစမ်းသည့်အခါ သင့်အနေဖြင့်လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုအား မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (“MPT”၊ “ကျွန်ုပ်တို့”၊ “ကျွန်ုပ်တို့ကို”၊ “ကျွန်ုပ်တို့၏”)က ဆောင်ရွက်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့် ရယူ နိုင်ပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုကို[Eilite] မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှု တွင်ပါဝင်ခြင်းဖြင့် သင်သည် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ နှင့်၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သည့်အခြားသော သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ၊ မူဝါဒများနှင့် စည်းကမ်းချက်များ (စုပေါင်း၍ “စည်းကမ်းချက်များ” ဟု ခေါ်ဆိုရန်) ကိုဖတ်ရှုပြီး နားလည်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ စည်းနှောင်မှုကိုခံယူရန် သဘောတူကြောင်း သဘောဆောင်ပါ သည်။ စည်းကမ်းချက်များသည် အချိန်အခါမရွေး ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခု ပြုလုပ်ပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုတွင် သင်၏ဆက်လက်ပါဝင်ကံစမ်းမှုသည် ပြောင်းလဲပြီးဖြစ်သော စည်းကမ်း ချက်များကို သင်သည် လက်ခံခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၁.၁ အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းကို[Elite]မှ အပြည့်အဝ စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပြီး ဝန်ဆောင်မှု နှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့် စုံစမ်း မေးမြန်းခြင်းများကို GawGamesသို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းတွင် MPT ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုသည် အောက်တွင်ထပ်မံရှင်းလင်းဖော်ပြမည့် ကျသင့်ငွေကောက်ခံခြင်း (Billing) နှင့် စာရင်းပေး သုံးစွဲခြင်း (Subscription) ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဖြင့် ကန့်သတ်ထားပါသည်။
၁.၂ စည်းကမ်းချက်များတွင် သင့်အား အတိအလင်း အပ်နှင်းထားခြင်းမရှိသည့် အခွင့်အရေးအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့က သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးပြုခွင့်ပေးသူများ၊ ထောက်ပံ့သူများ၊ ထုတ်ဝေသူများ၊ အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူများနှင့် အခြားသော အကြောင်းအရာများကို ပံ့ပိုးသူများက သီးသန့် ထိန်း သိမ်းထားပါသည်။သင်အနေဖြင့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်ဥပဒေတွင် ခွင့်ပြုသည့်အတိုင်းသာ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းတွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ပြီး အခြားသောအသုံးပြုခံစားမှုအားလုံးကို တင်းကျပ်စွာ တားမြစ် ထားပါသည်။
၁.၃ MPT သည် MPT ၏ တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခု သို့မဟုတ် အကြောင်း ပြချက်မရှိဘဲ သင်၏ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းသို့ ဝင်ရောက်မှု သို့မဟုတ် ပါဝင်ကံစမ်းမှုကို အကြောင်းကြားမှုနှင့် တာဝန်မရှိဘဲ အမြဲတမ်းသော်လည်းကောင်း၊ ယာယီသော်လည်းကောင်း ရပ်စဲခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့်ခွင့်ပြုရန်ငြင်းပယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်သည့်အခါတွင် စည်းကမ်းချက်များသည် ဤတွင်ဖော်ပြထားသော ဆက်လက်တည်ရှိနေမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် လိုအပ်သော အတိုင်းအတာအထိ သင့်အပေါ် ဆက်လက်စည်းနှောင်မှုရှိရမည်။
၁.၄ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းတွင် သင်၏ ပါဝင်ကံစမ်းမှုသည်ကြိုတင်စီစဉ်ထားသော နှင့် ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိသော ဝန်ဆောင်မှု အဆက်ပြတ်ခြင်းများပေါ် မူတည်နိုင်သည် ။ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း၏ အဆက်ပြတ်ခြင်း၊ (စီစဉ်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ စီစဉ်မထားဘဲဖြစ်စေ) ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်း သို့မဟုတ် မဝင်ရောက်နိုင် ခြင်းတစ်ခုခုအတွက် MPT သည် သင့်အပေါ် သို့မဟုတ်မည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်မဆို တာဝန်ရှိမည် မဟုတ်သည်ကို သင့်အနေဖြင့် သဘောတူပါသည်။
၁.၅ သင်၏အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းအသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် အလွဲသုံးစားပြုမှု၊ သင်၏ အခြားအသုံးပြုသူများနှင့် မည်သည့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက်မဆို သို့မဟုတ် အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင်၏ အခြားဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်မှုတစ်ခုခုအတွက် MPT တွင် တာဝန် မရှိစေရ။
၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများ GawGames သို့မဟုတ် အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးမှ အခြားနည်းဖြင့် တရားသဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ လွဲ၍ သက်ဆိုင်မှုရှိသည့်အတိုင်း ဤ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း နှင့်စပ်လျဉ်းသော ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ရုပ်ပုံများ၊ စာသား၊ ဂရပ်ဖစ်များ၊ သရုပ်ဖော်မှုများ၊ လိုဂိုများ၊ တီထွင်မှု မူပိုင်ခွင့်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှု အမှတ်တံဆိပ်များ၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဂီတနှင့် အကြောင်းအရာ အပါအဝင် ၎င်းတို့ချည်းသာ မဟုတ်သော (စုပေါင်း၍ “အကြောင်းအရာ”) MPT ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအချက်အလက်တစ်ခုခု နှင့် ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ဉာဏပစ္စည်းအခွင့်အရေးများ အားလုံးမှာ MPT နှင့် ၎င်း၏ အသုံးပြုခွင့်ပေးသူများ၊ ထောက်ပံ့သူများ၊ ထုတ်ဝေသူများ၊ အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူများနှင့် အခြားသော အကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူများ၏ သီးသန့်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဤတွင်အတိအလင်း ဖော်ပြ ထားသည်မှလွဲ၍ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း၏ မည်သည့်အရာကမျှ ဉာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများ တစ်ခုခုတွင်ရှိ သော သို့မဟုတ် ထိုအောက်တွင်ရှိသော အသုံးပြုခွင့်တစ်ခု သို့မဟုတ် အခွင့်အရေးတစ်ခု ဖန်တီးသည်ဟု မမှတ်ယူရ။ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း တွင် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက်များ တစ်ခုခု သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုမှ ဆင့်ပွားရရှိလာသော လက်ရာများကို ရောင်းချခြင်း၊ အသုံးပြု ခွင့်ပေးခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖြန့်ချီခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ဆင့်ပွားကူးယူခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ လူအများ မြင်သာစေရန် ပြသခြင်း၊ လူအများ မြင်သာစေရန် ဖျော်ဖြေခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ သင့်လျော် သလို ပြင်ဆင်အသုံးပြုခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖန်တီးခြင်းများကို သင့်အနေဖြင့် မပြုလုပ် ရန် သဘောတူပါသည်။ စည်းကမ်းချက်များမှ အတိအလင်း ခွင့်ပြုမထားသော မည်သည့်ရည်ရွယ် ချက်အတွက်မဆို အကြောင်းအရာအား အသုံးပြုခြင်းကို တင်းကျပ်စွာတားမြစ်ထားပါသည်။
၃.၁ ဤ ဝန်ဆောင်မှုကို ပါဝင်နိုင်ရန် GawGames ကို စာရင်းပေးသွင်းသုံးစွဲရမည်။
၄.၁ ဤ ဝန်ဆောင်မှုကို အနည်းဆုံး အသက်တစ်ဆယ်ရှစ်နှစ်(၁၈)နှစ်နှင့် အထက်ရှိပြီး (MPT SIM အသုံးပြု နေသည့်) မှတ်ပုံတင်ထားသော MPT သုံးစွဲသူများအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။
၄.၂ MPT ဝန်ထမ်းများအတွက် ပေးထားသော SIM များ အသုံးပြု နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၅။ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့် အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း
MPT အနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် လိုအပ်သော သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့် ကျိုးကြောင်း ဆီလျော်စွာ ဆက်စပ်သော ကိစ္စရပ်များအတွက်လည်းကောင်း၊ လူသိများစေရန်ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက် ပါဝင် ကံစမ်းသူများ၏ဗီဒီယိုများ နှင့်/သို့မဟုတ် ရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းအပါအဝင် ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့ ချည်းသာဟု ကန့်သတ်မထားသော MPT ၏ ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဈေး ကွက်ရှာဖွေရန်၊ ကြော်ငြာရန် နှင့်/သို့မဟုတ် အရောင်းမြှင့်တင်ရန် အလို့ငှာ ပါဝင်ကံစမ်းသူများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ကောက်ခံခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ဖွင့်ဟ ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့အကြား ဝေမျှခြင်းတို့ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် MPT၏ တရားဝင် ခွင့်ပြုထားသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တတိယပုဂ္ဂိုလ်များထံ ထိုကဲ့သို့သော ကိုယ်ရေးအချက် အလက်များ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ခြင်းကို ပါဝင်ကံ စမ်းသူများက သဘောတူညီပြီး ခွင့်ပြုပါသည်။
သင်သည် MPT နှင့် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများ၊ ပူးတွဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ၊ အေးဂျင့်များ၊ မန်နေဂျာများ နှင့် အခြားဆက်စပ်ကုမ္ပဏီများ၊ နှင့် ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ အေးဂျင့်များ၊ အရာထမ်းများ၊ ဒါရိုက်တာများအား (၁) သင်ထုတ်လွှတ်လိုက်သော သို့မဟုတ် ရရှိ သောဒေတာ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုအပါအဝင် သင်၏ ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုခြင်း နှင့် ဝင်ရောက်ခြင်း (၂) ဤတွင်ပါဝင်သော ကိုယ်စားပြုတင်ပြခြင်းများနှင့် အာမခံချက်များ တစ်ခုခုကို ချိုးဖောက်ခြင်း အပါအဝင် ယင်းတို့ချည်းသာမဟုတ်သော စည်းကမ်းချက်များ၏ စည်းကမ်းတစ်ခုခု အား ချိုးဖောက်ခြင်း (၃) ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှု အခွင့်အရေး တစ်စုံတစ်ရာ၊ လူတစ်ဦးတစ် ယောက်၏ ကျော်ကြားမှုကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများအား အလွှဲသုံးစားပြုခြင်းကို ကာကွယ်သည့် အခွင့် အရေးများ (Publicity Rights) သို့မဟုတ်၊ ဉာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေး များ အပါအဝင် ၎င်းတို့ ချည်းသာမဟုတ်သော တတိယပုဂ္ဂိုလ်အခွင့်အရေးတစ်ခုခုကို သင့်အနေဖြင့် ချိုးဖောက်ခြင်း၊ (၄) သင်၏ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်း တစ်ခုခုကိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ (၅) အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း မှတစ်ဆင့် သင်တင်ပြသော သို့မဟုတ် သင်ရရှိသော အချက်အလက်တစ်ခုခု၏ ရလဒ်တစ်ခုကြောင့် တောင်းဆိုမှု သို့မဟုတ် နစ်နာမှု တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် (၆) သင်၏ဖုန်းနံပါတ်(စာရင်းသွင်းထားသည်ဖြစ်စေ၊ စာရင်းမသွင်း ထားသည်ဖြစ်စေ)၊ ဟန်းဆက်၊ သို့မဟုတ် အခြားသော ကိရိယာမှတဆင့် အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဦး၏ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း သို့ဝင်ရောက်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုတို့မှ ပေါ်ပေါက်လာသော တောင်းဆိုမှုများ၊ နစ်နာမှု များ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ တာဝန်ခံမှုများ၊ ကုန်ကျမှုများ သို့မဟုတ် ကြွေးမြီနှင့် အသုံးစရိတ် များ (ရှေ့နေ့ခများအပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့ချည်းသာဟုကန့်သတ်မထားသော) တစ်ခုခု နှင့် အားလုံးထံမှနှင့် ၎င်းတို့ကို ဆန့်ကျင်၍ ကာကွယ်ပေးရန်၊ တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်စေရန်နှင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုမှ ကင်း လွတ်စေရန်သဘောတူပါသည်။
၇.၁ ဝန်ဆောင်မှု တွင်ပါဝင်သော သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု မှတဆင့်အခြားနည်းဖြင့် သင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲအပါအဝင်)နှင့် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများကို ဤနေရာ၌ “ရှိသည့်အတိုင်း” နှင့် “ရှိနိုင် မည့်အတိုင်း” ရနိုင်သောစနစ်ဖြင့်ပံ့ပိုးခြင်းဖြစ်သည်။ MPT သည် ဝန်ဆောင်မှု လည်ပတ်ခြင်း သို့မ ဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတွင်ပါဝင်သော သို့မဟုတ် အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း မှတဆင့် အခြားနည်းဖြင့်သင်အသုံး ပြု နိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားသော ၎င်း၏တိကျမှုအပါအဝင်သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက် အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲ အပါအဝင်) သို့မဟုတ် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို မည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုဖြစ်သော အတိအလင်းဖြစ်စေ၊ တိုက်ရိုက် မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ်စားပြု တင်ပြခြင်းများ သို့မဟုတ် အာမခံချက်များမပြုလုပ်ပါ။ သင်၏ ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုမှုသည် ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်ကို မိမိဘာသာ တာဝန်ယူသည်ဟု အတိအလင်း သဘောတူပါသည်။
၇.၂ MPT သည် ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု တွင် ပါဝင်သော သို့မဟုတ် အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း မှတဆင့်အခြားနည်းဖြင့် သင်အသုံးပြုနိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားသော သတင်း အချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲ အပါအဝင်) သို့မဟုတ် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများမှ ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုဖြစ်သည့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်သော၊ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော၊ ဆက်စပ်၍ဖြစ်သော၊ ပြစ်ဒဏ်အရဖြစ်သော နှင့်/သို့မဟုတ် အကျိုးဆက် အားဖြင့်ဖြစ်သော နစ်နာမှုများ အပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့ချည်းသာဟု ကန့်သတ်မထားသော နစ်နာမှုတစ်စုံ တစ်ရာအတွက် တာဝန်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
၇.၃ သင်အနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုသို့
ဝင်ရောက်ကံစမ်းရာတွင်မည်သည့်အကြောင်းအရင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ဝန်ဆောင်မှု နှင့်ဆက်စပ်၍ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ အကျိုးဆက်အရဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာသော မည်သည့် သဘောသဘာဝ သို့မဟုတ် အမျိုးအစားမဆိုရှိသည့် ဆုံးရှုံးမှု၊ ထိခိုက်အနာတရဖြစ်မှု၊ ထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် ပေးရန်တာဝန်ရှိမှုနှင့် အကျိုးဆက်များ တစ်ခုခုနှင့်အားလုံးမှ သော်လည်းကောင်း၊ MPT ကိုထိုသို့ဖြစ်နိုင်ခြေအား အသိပေးပြီးသည့်တိုင် ဝန်ဆောင်မှု တွင် ပါဝင်စဉ်အတွင်း အသုံးပြုခံစားခြင်းမှ ပေါ်ပေါက်လာသော သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့် ဆက်စပ်သော မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်မဆို ထိခိုက်အနာတရဖြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ရပ်ရပ်အပေါ် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ထိခိုက်မှုတစ်ရပ်ရပ် အပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့ချည်းသာဟု မကန့်သတ်လျက်၎င်းတို့မှသော်လည်းကောင်း ပေါ်ပေါက်လာသောနှင့် ၎င်းတို့ကိုအကြောင်းပြုသော တောင်းခံမှု များ၊ တောင်းဆိုမှုများ၊ အခွင့်အရေးများ၊ တရားစွဲဆိုရန် အကြောင်းတို့မှ MPT အားကင်းလွတ်စေရန်နှင့် ရာသက်ပန် လွတ်ငြိမ်းစေရန် သဘော တူညီပါသည်။
၇.၄ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများမှ ခွင့်ပြုနိုင်သည့် အများဆုံးအတိုင်းအတာအလျောက် MPT သည် ရည်ရွယ် ချက်တစ်ခုအတွက် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရောင်းချနိုင်စွမ်း၏ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အာမခံချက်များ အပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်းယင်းတို့ချည်းသာဟုကန့်သတ်မထားသောအတိအလင်း ဖော်ပြထား သည့်သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်မဟုတ်သည့် အာမခံချက်များအားလုံးကို မသက်ဆိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုပါသည်။
၇.၅ ဝန်ဆောင်မှု တွင်ပါဝင်သော သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု မှတဆင့်အခြားနည်းဖြင့် သင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲ အပါအဝင်) သို့မဟုတ် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများတွင် MPT ဆာဗာများ သို့မဟုတ် MPT မှ ပို့သောအီလက်ထရောက်နစ် ဆက်သွယ်မှုများသည် ဗိုင်းရပ်များ သို့မဟုတ် အခြားသော အန္တရာယ်ရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများမှ ကင်းလွတ်ပါသည်ဟု MPT က အာမခံခြင်း မပြုပါ။
ဝန်ဆောင်မှုတွင် GawGames အပါအဝင် တတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှ ရရှိသော သို့မဟုတ် ၎င်းတို့က ပံ့ပိုးပေး ထားသောအကြောင်းအရာ( တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ အကြောင်းအရာ )တို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍အဆိုပါတတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အကြောင်းအရာသို့မဟုတ် တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ အကြောင်းအရာ နှင့်ဆက်စပ်သော ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုခုအတွက် MPTတွင် တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏ သတင်းအချက်အလက်၊ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ တစ်ခုခုအား ရည်ညွှန်းချက်သည် MPT က ထောက်ခံမှု၊ ကမကထပြုမှု သို့မဟုတ် အကြံပြုမှု မဟုတ်ပါ သို့မဟုတ် ထိုသို့သွယ်ဝိုက်ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
http://mpt.com.mm/mm/about-home/terms-conditions-mm/ တွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည့် MPT ၏ အထွေထွေစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ (“GTC”) အရဖြစ်ရပါမည်။ ဤစည်းကမ်းချက်၏ စည်းကမ်းများနှင့် GTC အကြား ပဋိပက္ခတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက ဤစည်း ကမ်းချက်များ၏ စည်းကမ်းများက လွှမ်းမိုးရမည်။
………………. ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ
၁. ပံ့ပိုးပေးသူ၏ ဖော်ပြချက်
SMS, GPRS and 3G ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့် ပံ့ပိုးသူသည် ၄င်း၏ အသုံးပြုသူများအား မိုဘိုင်းဖုန်း (သို့) မည်သည့် ဖုန်းအမျိုးအစားမဆို ဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်သော အွန်လိုင်းဂိမ်းများ ၊ စာသားမက်ဆေ့ချ်များ ၊ အွန်လိုင်းသတင်းအချက်အလက်များ အပါအဝင် အွန်လိုင်း အရင်းအမြစ် ကွန်ယက်ကို ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုရန် ထောက်ပံပေးထားသည်။ ယေဘူယျ စည်းကမ်းချက်များအနေဖြင့် လက်ရှိဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးချဲ့ခြင်း၊ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင် တစိတ်တပိုင်းအနေဖြင့် ပံ့ပိုးသူဘက်မှ အကောင်ထည်ဖော်နိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ပြီး ပံ့ပိုးသူမှ ထပ်မံထည့်သွင်းထားသော မည်သည့်.အသစ်ကို မဆို အသုံးပြနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၂. ရရှိ သုံးစွဲနိုင်မှု
ဝန်ဆောင်မှုသည် (တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည် နှင့်အမျှ ) မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်း ၊ သတင်းအချက်လက် (သို့) မက်ဆေ့ချ် သိမ်းဆည်းထားမည် မဟုတ်ပါ ၊ (သို့) အချိန်မှီ မသိမ်းဆည်း (သို့) ဖျက်ပစ်ခြင်း (သို့) မှားယွင်းစွာ ပို့ခြင်းတို့ကို ပံ့ပိုးသူသည် မည်သည့် တာဝန်ကိုမှ ယူမည် မဟုတ်ပါ။ သင့်အနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုကို စာရင်းပေးသွင်းရန် အင်တာနက်လိုင်း (သို့) မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး နှင့် သက်ဆိုင်သော ဝန်ဆောင်ခကို ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။ သင့်အနေဖြင့် လက်ကိုင်ဖုန်း (သို့) ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပျူတာများ အပါအဝင်လိုအပ်သော မည်သည့်ပစ္စည်းကို ချိတ်ဆက်ရန်၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆက်စပ်၍ အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သော အင်တာနက်လိုင်း လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု အခကြေးငွေကို သင် ရယူနိုင်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှု ၊ အသုံးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ မိုဘိုင်းအော်ပရေတာအားပေးသော နှုန်းထားအတိုင်းသာ ပေးဆောင် ရမည်။ သင်၏ မိုဘိုင်းအော်ပရေတာမှ တဆင့် ငွေပေးချေပြီး လက်ခံရရှိကြောင်း ငွေတောင်းခံလွှာကို မိုဘိုင်းအော်ပရေတာထံမှ တောင်းယူနိုင်သည်။ သင်ပေးသွင်းထားသော ဒေသတွင်းနှင့် ပြည်တွင်းအခွန် (သို့) အခြားအခွန်များပေးဆောင်ထားခြင်းဖြင့် VAT ကို ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ မည်သည်အခွန် (သို့) ပြဌန်းထားသော အခွန်များကို ယခု အာဏာပိုင်များကသော်လည်းကောင်း ၊ အနာဂတ်တွင်ဖြစ်စေသော ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များမှ ဖြစ်စေ ၊ အခွန်ကောက်ခံရန် အခွင့်အာဏာရှိသော ဝန်ထမ်းဖြစ်စေ အခွန်ပေးဆောင်ရန် သုံးစွဲသူမှ ပေးဆောင် ရမည်။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် ဝဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိ အပြောင်းအလဲအသေးစိတ်ကို တင်ခြင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထားများကို ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
ဝန်ဆောင်မှုကို လုံခြုံစွာ အသုံးပြုရန် သက်ဆိုင်သည့် အခကြေးငွေများကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် အောက်ပါ အချက်အလက်များကို အာမခံ/လက်ခံပါသည်… (၁) သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် (နောင်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော သတင်းအချက်အလက်အဖြစ်ရည်ညွှန်းခြင်း) မှတ်ပုံတင် ဖောင်ပုံစံတွင် တိကျမှန်ကန်ပြီး ပြီးပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းခြင်း ၊ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ယခု လက်ရှိတွင် တိကျမှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွတ်ရန် သဘောတူပါသည်။ အကယ်၍ ပံ့ပိုးပေးသူသည် မှတ်ပုံတင်ထားသော အချက်အလက်သည် စစ်မှန်သော အခြေအနေများနှင့် မကိုက်ညီ ၊ မပြည့်စုံကြောင်း သံသယရှိပါက ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် သင်၏ အကောင့်ကို ဆိုင်းငံထားခြင်း (သို့) ရပ်ဆိုင်းခြင်း (သို့) လက်ရှိသုံးစွဲနေခြင်းကို တားဆီးနိုင်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူမှ ထုတ်ပေးထားသော မည်သည့် စကားဝှက်နှင့် အကောင့်ကို လျှိုဝှက် ထိန်းသိမ်းရန် သင်ကိုယ်တိုင် တာဝန်ရှိသည်။ သင်၏ စကားဝှက်များ (သို့) အကောင့်များအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကို သိရှိနားလည်ရန် သင်တာဝန်ဖြစ်သည်။ သင်သည် သင်၏အကောင့် တခုခြင်းစီကို ပြီးဆုံးသည့်အခါ ပိတ်ရန် (ဘယောက်စာမှ ပိတ်ရန်) ၊ သင်၏ စကားဝှက် နှင့် အကောင့်အား ခွင့်ပြုချက်မရပဲ အသုံးပြုခြင်းကို သတိပြုမိသော်လည်းကောင်း ၊ သံသယရှိသော်လည်းကောင်း ပံ့ပိုးသူကို ချက်ခြင်းဆက်သွယ်ပါ (သို့) အခြားမည်သည့် အကြောင်းအရာမဆို လုံခြုံရေး (သို့) ချက်ခြင်းကာကွယ် ရပ်တန့်ပစ်နိုင်သည်။ ဤစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းရန်နှင့် သင်၏အမှားအယွင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်ဆီးမှုများကို ပံ့ပိုးသူမှု တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။
ပံ့ပိုးသူသည် ၄င်းအသုံးပြုသူများ၏ အရေးကြီးကိုယ်ရေးအချက်လက်များကိုပါ ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ဤအရာကို သေချာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပံ့ပိုးသူ၏ ယေဘူယျစည်းကမ်းချက်များနှင့် အချိန်ကာလတခုထိဆက်စပ်နေသော ပေါ်လစီတခုကို ဖန်းတီးတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပံ့ပိုးသူသည် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် ပေါ်လစီများကို စုဆောင်းထားကြောင်း သင်သိပါသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် တစ်နိုင်ငံမှ တစ်နိုင်ငံသို့ ကျော်လွန်၍ တိုးတက်ပြန့်ပွါးစေပါသည်။
၄င်း၏ လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီများ ၊ တွဲဖက်စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများ ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံများ ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ (သို့) အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင် ဝန်ထမ်းများ တောင်းဆိုမှုကို ဆန့်ကျင်သော (သို့) တတိယ ပါတီမှ တောင်းဆိုခြင်းများတွင် တရားဝင် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ကုန်ကျစရိတ် အကူညီများ ၊ မည်သည့် တောင်းဆိုချက်များ (သို့) တောင်းဆိုမှုများသည် သင်ပေးပို့လိုက်သော သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပေါ်လာသော နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးအဆက်များ(သို့) ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ တဆင့်ပြန်လည် မျှဝေခြင်း (သို့) ယေဘူယျစည်ကမ်းများကို သင်ချိုးဖောက်ခြင်း၊ ကျူးလွန်ခြင်းမဆို (သို့) အခြားသူများ၏ အခွင့်ရေးများနှင့် ပတ်သက်၍ ချိုးဖောက်ခြင်း ကျူးလွန်ခြင်းမဆို ပံ့ပိုးသူအား သင်လျော်ကြေးပေးရမည်။
၇. ဝန်ဆောင်မှုမှ ပြန်လည်ရောင်းချမှု အပေါ် တားမြစ်ချက်
၄င်း အစိတ်ပိုင်းများကို စီပွါးဖြစ်ရည်ရွယ်၍ ကူးယူခြင်း ၊ ရောင်းချခြင်း ၊ ဖြန့်ဝေခြင်း (သို့) အသုံးပြုခြင်းများကို တင်းကျပ်စွာ တားမြစ်ထားသည်။
၈. သတင်းအချက်အလက်အသုံးပြုခြင်း ၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော စည်းကမ်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အထွေထွေ စည်းကမ်းများ ၊ ကစားနည်း စည်းကမ်းများ ၊ ပရိုမိုးရှင်းများနှင့် တားမြစ်ချက်များကို ပံ့ပိုးသူမှ သတ်မှတ်မည်ကို သဘောတူပါသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုခြင်းမရှိသော အကောင့်များကို ပံ့ပိုးသူမှ ဖျက်သိမ်းခွင့်ရှိသည်။ အထက်ပါ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပံ့ပိုးသူသည် ကြိုတင် အကြောင်းကြားစာထုတ်ပြန်ရန်မလိုပဲ အချိန်မရွေး ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ပေးပို့သော သတင်းအချက်လက်များအား မသိမ်းဆည်းခြင်း ၊ မှားယွင်းစွာ ဖျက်မိခြင်းများကို ပံ့ပိုးသူ မှ တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ကြောင်းကို သဘောတူလက်ခံပါသည် ။
၉. ဝန်ဆောင်မှု အပြောင်းလဲများ ပံ့ပိုးသူသည် ဝန်ဆောင်မှုကို အချိန်မရွေး ယာယီ (သို့) အမြဲတမ်း ပြောင်းလဲပြင်ဆင်နိုင်သည်။
သုံးစွဲသူသည် သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို အကြောင်းတစုံတရာ မရှိပဲ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည်ဟု ပံ့ပိုးသူမှ ထင်မြင်ယူဆပါက ဝန်ဆောင်မှုတွင်ပါဝင်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဖျက်သိမ်းခွင့် (သို့) ယေဘူယျအားဖြင့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက် ဆန့်ကျင်ခြင်း (သို့) အခြားသောအကြောင်းအရာများကြောင့် ချိုးဖောက်ပါက ပံ့ပိုးသူမှ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဖျက်သိမ်းခွင့် ရှိကြောင်း သဘောတူပါသည်။ ဤယေဘူယျ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိပဲ သင်၏ဝင်ရောက်သုံစွဲမှုကို ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။ ပံ့ပိုးသူသည် သင့်အနေဖြင့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို မလိုက်နာပါက သင်သုံးစွဲနေသော အကောင့် ၊ သတင်းအချက်အလက် ၊ ဖိုင်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ထပ်မံရယူရန် ကိစ္စများကို နှောက်နှေးမှုမရှိပဲ ဖျက်သမ်းနိုင်ကြောင်း သဘောတူပါသည်။
၁၁. ကြေငြာရှင်များ ၊ စပွန်ဆာများနှင့် အရောင်းအဝယ်
သင် ၊ စပွန်ဆာ နှင့် ကြေငြာသူတို့ကြား ပြုလုပ်သော မည်သည့် ပရိုမိုးရှင်း ကိစ္စများကိုမဆို ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ငွေပေးချေမှု အပါအဝင် အခြားအာမခံများ ၊ စည်းကမ်းချက်များ ၊ ငွေပေးငွေယူသည် ကိစ္စများသည် သင်နှင့် စပွန်ဆာ ၊ ကြေငြာရှင်များ၏ ကိစ္စများသာ ဖြစ်သည်။ ပံ့ပိုးသူသည် ထိုကဲ့သို့ အပြောင်းလဲများ (သို့) ဝန်ဆောင်မှုများတွင် စပွန်ဆာများ ၊ ကြေငြာရှင်များ ရှိနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မည်သည့် သဘာဝထိခိုက်မှုကိစ္စများကိုမှ တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ကြောင်း သဘောတူပါသည်။
၁၂. ပံ့ပိုးသူ၏ မူပိုင်ခွင့်
ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်သော ဆော့ဝဲလ် (နောက်ပိုင်းတွင် ဆော့ဝဲလ်ဖြစ် ရည်ညွန်းအသုံးပြုခြင်း) ၊ လျှိုဝှက်သတင်းအချက်အလက်များကို တရားဝင် အသိပညာဆိုင်ရာနှင့် စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှု အခွင့်အရေး ဥပဒေနှင့် အခြားဥပဒေဆိုင်ရာ ပြဌန်းချက်များဖြင့် ပံ့ပိုးသူမှ ကာကွယ်ပေးထားကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်စေပါသည်။ မူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ ၊ ဝန်ဆောင်မှု အမှတ်များ ၊ မူပိုင်ခွင့်များ (သို့) အခြားပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးနှင့် ဥပဒေများ၊ စပွန်ဆာပေးသူများ၏ ကြေငြာများတွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်နှင့်သက်ဆိုင်သော ဥပဒေများ (သို့) ဝန်ဆောင်မှုမှ ကမ်းလှမ်းသော သတင်းအချက်လက်များကို နားလည်လက်ခံသဘောတူပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုမှ ဖန်တီး ထုတ်လုပ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ငှားရမ်းခြင်း၊ ကူးယူရောင်းချခြင်းများကို ဖန်းတီးထုတ်လုပ်ထားသူ၏ တရားဝင်ရေးသားထားသောခွင့်ပြုချက်တစုံတရာမရှိပဲ ငှားရမ်းခြင်း၊ ကူးယူရောင်းချခြင်း၊ ပြုပြင်ဖန်းတီးခြင်း နှင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကို မပြုလုပ်ရပါ။ ပြုလုပ်ပါက ထိရောက်စွာ အရေးယူမည်။ ပံ့ပိုးသူမှ သင့်အားပေးထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လွဲပြောင်းပေးခြင်း၊ ၄င်းဆော့ဝဲလ်၏ ကုတ်နံပါတ် အားသုံးစွဲခွင့်ပြုခြင်း၊ မည်သည့်ကုတ်အရင်းမြစ်ကိုမဆို ကူးယူခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း စသည်ဖြင့် (သို့) ပြန်လည်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခြင်း (သို့) နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲခြင်း (သို့) ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခြင်း (သို့) အခြားသောနည်းလမ်းဖြင့် အရင်းအမြစ်ကုတ်ကို ရှာဖွေရန် ကြိုးစားခြင်း(တတိယပါတီမှ ပြုလုပ်ခွင့် ပြုသည်) (သို့) ထိုကဲ့သို သော ကိစ္စရပ်များကို မဖြစ်မနေပြဌာန်းထားသော ဥပဒေမှအပ ၊ လျှိုဝှက်လိုင်စင်ရယူခြင်း၊ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အခွင့်ရေးများ ရယူခြင်း (သို့) ဆော့ဝဲလ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မည်သည့်အခွင့်ရေးကိုမဆို တစ်ဦးတယောက် (သို့) အဖွဲ့အစည်းသို့ လွှဲပြောင်းခြင်း မပြုလုပ်ရန် သဘောတူပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုကို ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ အခြားအကြောင်းပြချက် တခုခုကြောင့် မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို ပြောင်းလဲခြင်း မပြုလုပ်ရန် သဘောတူလက်ခံပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု အသုံးပြုသူအနေဖြင့် အကြောင်းအရာဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆိုင်သော အရာများကိုသာ အသုံးပြုရန် သဘောတူပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် သင်အသုံးပြုသော သတင်းအချက်အချက်အလက်မှ တစ်ပုဒ်ကိုသာ ကူးယူရန်နှင့် ထိုကော်ပီကို မိမိသီးသန့် အသုံးပြုရန်သာ ခွင့်ပြုပါသည်။
ဤသဘောတူညီချက်သည် က) မည်သည့် အာမခံချက် (သို့) မည်သည့်သဘောသဘာဝ ကိုမဆို အာမခံခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်လျော်သော ရောင်းဝယ်မှုများတွင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ စည်းကမ်းချိုးဖောက်ခြင်းများသည် ပံ့ပိုးသူနှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။
ခ) (၁)ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အချက်အလက်များ (သို့) သင်ဝယ်ယူထားသော အခြား ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှု အရည်အသွေးများသည် သင်မျှော်မှန်းထားခြင်းနှင့် မကိုက်ညီခြင်း၊ (၂) ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းရရှိသောရလဒ်များသည် မှန်ကန်သော (သို့) ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ (၃) မှားယွင်းသော ဆော့ဝဲလ်များပြင်ဆင်မှန်ကန်စေခြင်းတို့ကို ပံ့ပိုးသူမှ အာမခံပေးမည် မဟုတ်ပါ။
ဂ) မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို အန္တရာယ်များသောဒေါင်းလော့များကို ရယူခြင်း၊ အခြား ပစ္စည်းကရိယာများ ကို အသုံးပြု၍ သတင်းအချက်အလက်များပျက်ဆီးခြင်းသည် သင်၏တာဝန်သာဖြစ်သည်။ ဃ) အာမခံချက်၊ အာမခံများ၊ ကိုယ်စားလှယ်ပြုခြင်းများသည် ပံ့ပိုးသူ (သို ) ဝန်ဆောင်မှုမှ နှုတ်ဖြင့်ပြောသော သတင်းအချက်အလက် (သို့ ) အရိပ်အမြွက် (သို့) အကြံဉာဏ်သည် စည်းမျဉ်းစည်ကမ်းများတွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၁၄. တာဝန်ယူမှု ကန့်သတ်ချက်
ပေးသွင်းသူ၊ တိုက်ရိုက်၊ သွယ်ဝိုက်သော၊ လတ်တလော၊ အထူး၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော သို့မဟုတ် အငြင်းပွားဖွယ်ရာပျက်စီးမှု သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုများပါဝင်သော စီးပွားရေးစာချုပ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ ဒေတာများဆုံးရှုံးမှု (၁) ပေါ်ပေါက်လာသည်ကိုသင်သဘောတူသည် ၀ န်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်မစွမ်းနိုင်ခြင်း၊ (၂) ကုန်ပစ္စည်းများ၊ အချက်အလက်၊ ၀န်ဆောင်မှုများ၊ ၀ယ်ယူထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများမှ ၀ န်ဆောင်မှုများမှ ၀ ယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုမှ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့် အစီရင်ခံစာများ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ (၃) သင်၏သတင်းစကားများ သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်များ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲမှုများ၊ (၄) ၀န်ဆောင်မှုတွင်ပါ၀င်သောသူများ၏ ဖော်ပြချက်များ သို့မဟုတ် အပြုအမူများ၊ (၅) ၀န်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်နွယ်နေသော အခြားကိစ္စရပ်များ၊ အကယ်၍ အမှားအယွင်းတစ်ခုဖြစ်ပွားလျှင်လူတစ် ဦး၊ ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သော ၊ ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သော မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို ဤဝန်ဆောင်မှုကို သင်အသုံးမပြုပါနှင့် ၊ ဤသို့သောအသုံးပြုမှုအတွက် စွန့်စားမှုအားလုံးကို သင်အသုံးမပြုပါနှင့် ။
ဝန်ဆောင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နာမည်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ စာလုံးပါသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ရုပ်ပုံပါသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ သို့မဟုတ် လိုဂိုပါသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ သက်ဆိုင်သူထံမှ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ အသုံးပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းသဘောတူပါသည်။
ဤအထွေထွေမှတ်စုများနှင့် အခြေအနေများသည် သင်နှင့်သက်ဆိုင်သူကြား ယခင်သဘောတူညီချက်များ၏ နေရာတွင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် တတိယပါတီများမှ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲများကို အသုံးပြုပါက အပိုဆောင်းအထွေထွေစည်းမျဉ်းများနှင့်အခြေအနေများသည် သင်နှင့် သက်ဆိုင်နိုင်သည်။ အထွေထွေစည်းမျဉ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များတွင်ဖော်ပြထားသော အချို့အခွင့်အရေးများ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်များကို ကျင့်သုံးရန် ပံ့ပိုးသူမှ မည်သည့်ပတ်သက်မှုကြောင့်ဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေပြဌာန်းချက်များ မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ ဥရောပဥပဒေသည် သင်နှင့်ပေးသူစပ်ကြား ဆက်ဆံရေးကို အကျုံးဝင်သည်။ အငြင်းပွားမှုများကို သင်၏နိုင်ငံတကာအဆင့်အရည်အချင်းပြည့်မီသော တရားရုံးသို့တင်ပြရမည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီသော၊ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော တရားရုံးတစ်ခုသည် အထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်မသတ်ဆိုင်ဟုထင်မြင်ပါက ပါတီများအနေဖြင့် ထိုသတ်မှတ်ချက်မှထင်ဟတ်သော ပါတီများ၏ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းရန် ကြိုးပမ်းရမည်ဟုဆုံးဖြတ်သည်။ အထွေထွေစည်းမျဉ်းများနှင့် အခြေအနေများမှာ ချို့တဲ့နေဆဲဖြစ်သည်။
ယခုဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် လက်ရှိတွင် ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ရည်ညွှန်းရန်အတွက် အွန်လိုင်းနှင့် SMS, GPRS နှင့် 3G ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် အွန်လိုင်းနှင့် မိုဘိုင်းဖျော်ဖြေရေးနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို စုဆောင်းရယူနိုင်သူအဖြစ် သင့်အားထောက်ပံ့ပေးသည်။ သီးခြားဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက အထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီသည် ဝန်ဆောင်မှုကိုတိုးချဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် တိုးတက်မှုရှိစေသည့် အဆောက်အအုံအသစ်များအားလုံးအတွက် ပံ့ပိုးသူမှ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များထုတ်ပြန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုရာတွင် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကို ပံ့ပိုးသူမှလေးစားစွာဖြင့် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကို အမြဲအလေးအနက်ထား ကိုင်တွယ်ကြည့်ရှုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ENGLISH DATAကာကွယ်ရေးဥပဒေနှင့် မကြာမီအနာဂတ်တွင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးဥပဒေမှ ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်ရပါသည်။ သင်၏အချက်အလက်သည် Provider’s User’s Record တွင်ပါဝင်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်သည့်အချိန်တွင် သင်၏လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးသူ၏ ကိုယ်ပိုင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းစနစ်တွင် ကျွှန်ုပ်တို့မှထည့်သွင်းထားပါမည်။ ဝန်ဆောင်မှုများအသုံးပြုရန်နှင့် ဆုများလက်ခံရယူရန် သင်ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များမှာ သင်၏အမည်၊ မိသားစုအမည်၊ ကျား/မ၊ အသက်နှင့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်(မိုဘိုင်း) တို့ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤအထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကို အတိအလင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိခဲ့လျှင်တောင်မှ သင်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်စွက်ရန် ကျွှန်ုပ်တို့ကို တောင်းဆိုခြင်းမဟုတ်လျှင် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို အခြားသူအား ထုတ်ဖော်ပြသလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
၁၈။ ရွေးချယ်ပါ/ OPT-IN
အသုံးပြုသူကခွင့်ပြုပေးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ပံ့ပိုးသူသည် ဝန်ဆောင်မှုကိုစတင်ပါမည်။ ဝန်ဆောင်မှု၏သော့ချက်စာလုံးကို ပံ့ပိုးသူ၏တိုတောင်းသောနံပါတ်သို့ပေးပို့လျှင် ပံ့ပိုးသူမှခွင့်ပြုချက်ပေးမည်။ ဥပမာ - နံပါတ် ၈၃၇၉သို့ ONဟူသော စကားလုံးအားပေးပို့ခြင်းဖြင့် သင်သည်သင်၏ subscription status ကို အတည်ပြုသည့် အတည်ပြုစာကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ဂိမ်းဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်မှုမစတင်မီ သင်အသုံးပြုနေသော ဖုန်းအမျိုးအစားကိုပို့ရန် သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ Gaw Gamesသည် ၄င်း၏အမှတ်တံဆိပ်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်တွဲဖက်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုများအောက်တွင်ပေးအပ်သည့် အဆင့်မြင့်မိုဘိုင်းလ်ငွေပေးချေမှု၊ ဝန်ဆောင်မှုများကိုပိုင်သော တစ်ခုတည်းသောပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအနေဖြင့် မိုဘိုင်းဂိမ်းများစွာကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ ရပ်တန့်ရန်အတွက်အသုံးပြုသူသည် ဖုန်း ၈၃၇၉ သို့ OFF ဟူသောစာလုံးရိုက်နှိပ်ပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် သုံးစွဲသူများကိုဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် Hotline ၁၀၆သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုရပ်စဲနိုင်သည်။
၁၉။ ဘေးဖယ်ထားခြင်း / OPT-OUT
သတင်းအချက်အလက် တားဆီးနှောက်ယှက်ခြင်းများကို SMS မှတဆင့် သင်လက်ခံရရှိနိုင်သည်။ ဤ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ဘ်ဆိုဒ်ရှိဝက်ဘ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ SMS မှရရှိသော သတင်းအချက်အလက်ကို သော့ချက်စာလုံးဖြင့် SMS စာတစ်စောင်ပို့ခြင်းဖြင့်ပြတ်တောက်နိုင်သည်။ ၈၃၇၉. သို့ OFF သို့ သင်၀င်ရောက်ရန်အသုံးပြုသော အတိုကောက်နံပါတ် သို့ ဤစာကိုသင်ပို့နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Text Alert ၀ န်ဆောင်မှုများ ကိုရပ်တန့်ရန် နံပါတ် ၈၃၇ ၉ သို့ စာသား OFF ဖြင့်စာတစ်စောင်ပေးပို့ပါ။ ရပ်တန့်ရန်၊ သုံးစွဲသူသည် SMS၊ OFF သို့ ၈၃၇၉ သို့ ခေါ်ဆိုခြင်း သို့မဟုတ် ဖောက်သည် ဝန်ဆောင်မှုများကို တယ်လီဖုန်း ၁၀၆ တွင်ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။
အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အစီအစဉ်များကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်းအားဖြင့် မည်သည့် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လူပုဂ္ဂိုလ်များသည် အသုံးပြုသူများနှင့်ပတ်သက်သော မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမျှ မရရှိနိုင်ဟု သင်လက်ခံယူဆနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ ပံ့ပိုးသူ၏ တာ၀န်နှင့်သက်ဆိုင်သော အထွေထွေစည်းကမ်းချက်များ အောက်တွင်ကြည့်ပါ။
- သင်နှင့်ပံ့ပိုးသူအကြားသဘောတူညီမှုကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် သတင်းအချက်အလက် သို့မဟုတ် ယင်း၏ပေါင်းစပ်မှုကို အသုံးပြုရန် ပံ့ပိုးသူ၏ အကောင်းဆုံး ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို သင့်အားအသုံးပြုခွင့်ပေးထားသည်။
- သင်၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် သို့မဟုတ် SMS မှတဆင့်; ဆက်သွယ်ထားသောသတင်းအချက်အလက်ကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်
- ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူမှကမ်းလှမ်းမှုများ၊ အထူးလျှော့စျေးများ၊ အသစ်သောတိုးတက်မှုများနှင့် အပိုဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်း သင့်အားအကြောင်းကြားနိုင်သည်
- ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များ သို့မဟုတ် စီးပွားဖြစ် သို့မဟုတ် ပရဟိတလုပ်ငန်းအတွက် ပံ့ပိုးသူနှင့်၎င်း သို့မဟုတ် သင်ရွေးချယ်ထားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြား တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုကိုတည်ဆောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ပံ့ပိုးသူသည် ထိုသတင်းအချက်အလက်များကို အမည်ဝှက်ပြီးသုံးနိုင်သည် သို့မဟုတ် အမည်မဖော်လိုသောတတိယပါတီများသို့ ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်
၂၁။ သင့်အနေနှင့် ဤမူဝါဒကိုသဘောတူသည် ပံ့ပိုးသူ၏ ၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီနှင့် အထွေထွေစည်းကမ်းချက်များ ကို သင်သဘောတူသည်။ ဤအချက်ကိုသင်သဘောမတူပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီနှင့် အထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ တိုးချဲ့ခြင်း သို့မဟုတ်MPTMPT ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ - [ဂေါ်ဂိမ်းများ] ဤစာမျက်နှာသည် [ဂေါ်ဂိမ်း] ( ဝန်ဆောင်မှု ) တွင်ပါဝင်ကံစမ်းသည့်အခါ သင့်အနေဖြင့်လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုအား မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (“MPT”၊ “ကျွန်ုပ်တို့”၊ “ကျွန်ုပ်တို့ကို”၊ “ကျွန်ုပ်တို့၏”)က ဆောင်ရွက်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့် ရယူ နိုင်ပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုကို[Eilite] မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှု တွင်ပါဝင်ခြင်းဖြင့် သင်သည် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ နှင့်၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သည့်အခြားသော သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ၊ မူဝါဒများနှင့် စည်းကမ်းချက်များ (စုပေါင်း၍ “စည်းကမ်းချက်များ” ဟု ခေါ်ဆိုရန်) ကိုဖတ်ရှုပြီး နားလည်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ စည်းနှောင်မှုကိုခံယူရန် သဘောတူကြောင်း သဘောဆောင်ပါ သည်။ စည်းကမ်းချက်များသည် အချိန်အခါမရွေး ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခု ပြုလုပ်ပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုတွင် သင်၏ဆက်လက်ပါဝင်ကံစမ်းမှုသည် ပြောင်းလဲပြီးဖြစ်သော စည်းကမ်း ချက်များကို သင်သည် လက်ခံခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၉.၂ စည်းကမ်းချက်များသည် http://mpt.com.mm/mm/about-home/terms-conditions-mm/ တွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည့် MPT ၏ အထွေထွေစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ (“GTC”) အရဖြစ်ရပါမည်။ ဤစည်းကမ်းချက်၏ စည်းကမ်းများနှင့် GTC အကြား ပဋိပက္ခတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက ဤစည်း ကမ်းချက်များ၏ စည်းကမ်းများက လွှမ်းမိုးရမည်။
၁. ပံ့ပိုးပေးသူ၏ ဖော်ပြချက် SMS, GPRS and 3G ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့် ပံ့ပိုးသူသည် ၄င်း၏ အသုံးပြုသူများအား မိုဘိုင်းဖုန်း (သို့) မည်သည့် ဖုန်းအမျိုးအစားမဆို ဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်သော အွန်လိုင်းဂိမ်းများ ၊ စာသားမက်ဆေ့ချ်များ ၊ အွန်လိုင်းသတင်းအချက်အလက်များ အပါအဝင် အွန်လိုင်း အရင်းအမြစ် ကွန်ယက်ကို ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုရန် ထောက်ပံပေးထားသည်။ ယေဘူယျ စည်းကမ်းချက်များအနေဖြင့် လက်ရှိဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးချဲ့ခြင်း၊ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင် တစိတ်တပိုင်းအနေဖြင့် ပံ့ပိုးသူဘက်မှ အကောင်ထည်ဖော်နိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ပြီး ပံ့ပိုးသူမှ ထပ်မံထည့်သွင်းထားသော မည်သည့်.အသစ်ကို မဆို အသုံးပြနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ခ) (၁)ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အချက်အလက်များ (သို့) သင်ဝယ်ယူထားသော အခြား ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှု အရည်အသွေးများသည် သင်မျှော်မှန်းထားခြင်းနှင့် မကိုက်ညီခြင်း၊ (၂) ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းရရှိသောရလဒ်များသည် မှန်ကန်သော (သို့) ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ (၃) မှားယွင်းသော ဆော့ဝဲလ်များပြင်ဆင်မှန်ကန်စေခြင်းတို့ကို ပံ့ပိုးသူမှ အာမခံပေးမည် မဟုတ်ပါ။ ဂ) မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို အန္တရာယ်များသောဒေါင်းလော့များကို ရယူခြင်း၊ အခြား ပစ္စည်းကရိယာများ ကို အသုံးပြု၍ သတင်းအချက်အလက်များပျက်ဆီးခြင်းသည် သင်၏တာဝန်သာဖြစ်သည်။
ဃ) အာမခံချက်၊ အာမခံများ၊ ကိုယ်စားလှယ်ပြုခြင်းများသည် ပံ့ပိုးသူ (သို ) ဝန်ဆောင်မှုမှ နှုတ်ဖြင့်ပြောသော သတင်းအချက်အလက် (သို့ ) အရိပ်အမြွက် (သို့) အကြံဉာဏ်သည် စည်းမျဉ်းစည်ကမ်းများတွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၁။ သင့်အနေနှင့် ဤမူဝါဒကိုသဘောတူသည်
ပံ့ပိုးသူ၏ ၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီနှင့် အထွေထွေစည်းကမ်းချက်များ ကို သင်သဘောတူသည်။
ဤအချက်ကိုသင်သဘောမတူပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီနှင့်
အထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ တိုးချဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ခြင်းတို့အား မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဤစာမျက်နှာများကို ပုံမှန်ဖတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးပါသည်။
ဂေါ် ဂိမ်းများသည် Android ဖုန်းများအတွက်သီးသန့်ဖြစ်ပြီး I-phone အသုံးပြုသူများအတွက် ​ဒေါင်းလုတ်ရနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ စာရင်းသွင်းခြင်း ပယ်ဖျက်ရန် ၁၀၆သို့​ခေါ်ဆိုပါ။